jeudi, 12 janvier 2017 20:21
Jiolahy mpanakan-dalana : Roa tratra ambodiomby tao Manambonitra RN2
Manararaotra ny haratsian-dalana amin’ny lalam-pirenena faha-2 ao Manambonitra ireo andian-jiolahy mpanakan-dalana sy mpandrava entana sy mpandeha, izay efa naharaisan’ny Zandary tao Brickaville sy teto Toamasina ary ny tao Antananarivo fitarainana maro.
Omaly alarobia tokony ho tamin’ny 09 ora alina no saron’ny Zandary avy ao Brickaville ny roa tamin’ireo mpanao izany asa ratsy izany.
Mbola tratra teny amin’izy ireo ny basy poleta iray fampiasan’izy ireo andrahonana ireo mpandeha sy ny mpamily.
Atao famotorana ao Brickaville izy ireo amin’izao fotoana izao.
jeudi, 12 janvier 2017 20:19
Salon de l'étudiant spéciale rentrée janvier 2017
Isan-taona dia mikarakara manokana ny Salon de l’étudiant ny MADA JEUNE
Ho an’ity volana janoary ity anefa dia miantso ireo mpianatra izy ireo izay tsy tonga tamin’ny volana oktobra iny, izay tao anatin’ny fialantsasatra, ary nisy ihany koa ireo izay nanao ny fifaninana tany amin’ny oniversitem-panjakana, koa dia izay no nahatonga ny MADA JEUNE hikarakara ireo mpianatra.
Ho fanampin’izany dia misy hatrany toy ny isan-taona ny Guide na toro-lalana izay amidy 2000 Ariary.
Izany moa dia atao ao amin’ny lapan’ny fanatanjahan-tena Mahamasina androany sy rahampitso 13 Janoary 2017 izay misokatra ho an’ny rehetra, ary tsy misy ny vidim-pidirana.
Manodidina ny 3000 eo ho eo ny olona andrasana amin’izany, ary miisa 25 ny toeram-pampianarana mandray anjara amin’ity Salon ity.
jeudi, 12 janvier 2017 19:54
Horohorontany: Mbola miaina anaty tebiteby ny mponina eto Antsirabe
Maromaro ny fahavoazana teto Antsirabe vokatry ny horohorontany halina iny. Nitriatra ny rindrina, vaky ny fitaratra, toy ny hita eo amin’ny Lapan’ny Tanàna Antsirabe sy ny Lapan’ny Faritra Vakinankaratra ankoatra ireo trano fonenana marobe eran’Antsirabe nisy fahasimbana, sy ny orinasa afaka haba iray teny amin’ny Route d’Ambositra izay niato mihitsy tamin’ny asany aloha androany fa natahorana hirodana ny tranony.
Mbola ao anaty tebiteby tanteraka moa ny eto Antsirabe, izay tsy lavitra loatra ny foiben’iny horohorontany iny.
jeudi, 12 janvier 2017 19:49
Akademia Miaramila Antsirabe : Lanonana telo sosona ny 12 janoary
Teo ny maha Andron’ny manamboninahitra ny 12 janoary, fa teo ihany koa ny fanokafana ny fankalazana ny faha-50 taonan’ny ACMIL ity ary ny fametrahana ambany faneva ireo mpianatra 66 mianadahy ao amin’ny andiany faha-40 mivantana sy ny andiany faha-23 manokana.
Nisy ny fombafomba fanao isaky ny faha 12 janoary izay notarihin’ireo andiny faha 40 vao niditra ireo, narahina fitokanana tsangambato goavam-be eo am-pidirana ny vavahady.
Niatrika ny fotoana moa ny filoham-pirenena amin’ny maha lehibe faratampon’ny foloalindahy azy, ka nampahafatarina azy fa isan’ny ho tsangambaton’izany ihany koa ny fananganana tranom-bakoka ho an’ny Akademia Miaramila Antsirabe sy ny fanavaozana ny toeram-pijerena sarimihetsika izay havadika ho “Amphithéatre” ao amin’ny ACMIL.
jeudi, 12 janvier 2017 14:53
Indostria : Mitady hirika hanakatonana ny Triple A ny Fanjakana
Nandefa iraka tany Andranomanelatra Antsirabe ny Ofisim-pirenena misahana ny tontolo iainana, nanao fanadihadiana ny fiantraikan’ny fihodinan’ny orinasa Tiko izay tantanin’ny Triple A (AAA) ankehitriny, amin’ny resaka tontolo iainana.
Mitady hirika hanakatonana ny orinasa “Triple A” ny Fanjakana ka ny vokatr’io fanadihadiana amin’ny fiantraikany amin’ny tontolo iainana io no hanamarinana ny firosoany amin’ny fanatanterahana izany.
jeudi, 12 janvier 2017 11:55
Ambositra : Nisy fahasimbana noho ny horohorontany ny CEG Annexe Ambohimiadana
Namela takaitra tao amin’ny CEG Annexe Ambohimiadana eny Ampany ny horohorontany nitranga halina. Nitriatra be ny rindrina, vokany dia mbola noravana ny mpianatra androany.
Mahajanga : Adiny sivy isan’andro ny delestazy
Efa tsy mahataitra ny olona intsony ny fahatapahan-jiro raha eto Mahajanga. Mahazo ny anjarany avokoa ireo Fokontany miisa 26 eto an-toerana. Mila ho adiny sivy isan’andro ny fahatapahana. Vao maraina amin’ny dimy dia efa tapaka ny jiro ary tsy miverina izany raha tsy efa amin’ny sivy ora alina.
Sahirana ireo mpianatra rehefa hamerin-desona any an-trano, voatery ravaina mialoha ny mianatra hariva fa maizina ny ao an-dakilasy.
Nanao fanambarana ny tomponandraikitra ao amin’ny Jirama fa tsy hisy intsony ny delestazy manomboka anio alakamisy, ka samy miandry ny fahatanterahan’izany ny rehetra.